I Amerika dia anisan'ny kaontinenta dimy, ny ranomasina mamaritra azy dia ny Ranomasimbe Pasifika any andrefany, ny Ranomasimbe Atlantika any atsinanany, ny Ranomasimbe Arktika any avarany ary ny Ranomasimbe Atsimo any atsimony. Ny faritany tena misongadina dia i Amerika Avaratra sy i Amerika Atsimo. Ireo faritra roa ireo dia voasaraky ny andilan-tanin'i Panama.
Amin'ny lafiny ara-jeografia, ny velarantaniny dia 42 tapitrisa km2 ary ny isan'ny mponina dia 930 tapitrisa eo ho eo araka ny fanakekezana natao tamin'ny taona 2009.
1.1 Ny mponina
2 Ny firenena ao Amerika
2.1 Firenena ao Amerika Avaratra
2.2 Firenena ao Amerika Afovony
2.3 Firenena ao Amerika Atsimo
I Amerika Avaratra avy amin'ny farany avaratra hatramin'ny farany atsimo dia mirefy 15 000 km. Raha isaina avokoa ny velarantany manontolon'i Amerika Avaratra sy ny velarantany manontolon'i Amerika Atsimo dia kontinenta faharoa lehibe indrindra eto an-Tany i Amerika (velarantany manontolo: 42,44 tapitrisa km²). Avy amin'ny lafiny andrefana hatrany amin'ny lafiny atsinanana dia ahitana karazan' endri-paritra telo:
Ny morontsiraka andrefana dia ahitana tendrombohitra avo (mahatakatra hatrany amin'ny 6 959 m ny tendrombohitra Aconcagua): ao Amerika Atsimo no ahitana ny tangorom-bohitra lava indrindra ivelan-dranomasina (6 000 km ny avy any atsimo mianavaratra).
Eo amin'ny morontsraka atsinanana indray no ahitana tany lemaka. Misy ihany ny tendrombohitra anefa ny haavony dia tsy mihoatra ny 3 000 m mihitsy; ohatra izao ny tangorombohitr'i Appalaches any avaratra, na ny tany avo brazilianina any atsimo.
Ny faritra afovoan'ny kontinenta amerikanina roa indray dia ahitana na tany lemaka (eo amin'ny faritra afovoan'ny Amerika Avaratra), na alabe rehefa manakaiky ny Fehibe (alan'i Amazônia, any Amerika Atsimo). Ny toerana misy an'ireo tany lemaka sy alabe ireo dia tany lemaka iva ikambanan'ny renirano (bassin).
Ny isan'ny mponin'i Amerika dia marikitra ny 930 tapitrisa eo tamin'ny 2009. Ny isan'ny mponiny amin'izao fotoana izao dia in-jaton'ny isan'ny mponiny vao zato taona lasa izay. Izy io dia noho ny fifindra-monina ary ny fitomboan'ny isan'ny mponina ao amin'ny faritra atsimon'i Amerika ary eo amin'ny faritra Karaiba.
Ny toerana ipetrahan'ny ankamaroan'ny mponina ao Amerika dia ireo tanàna eo amin'ny faritra amorontsiraka, ahitana ny tanàna lehibe indrindra eto an-tany (São Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, na New York, Boston, Los Angeles...)
Ny mponina tonga voalohany tao Amerika, izay antsoina hoe "Teratanin'i Amerika" na Amerindianina dia miisa eo amin'ny dimampolo tapitrisa eo ho eo. Izany hoe mahery kelin'ny 5 % ny isan'ny mponina manontolo. Ny teny tenenina indrindra ao Amerika dia teny eoropeanina avokoa. Ny fiteny amerindianina be mpiteny indrindra dia ny fiteny ketsoà (frantsay / anglisy / espaniola: quechua) izay arahin'ny fiteny nahoatla.
Ny firenena ao AmerikaHanova
Firenena ao Amerika AvaratraHanova
Firenena ao Amerika AfovonyHanova
Firenena ao Amerika AtsimoHanova
Afrika - Azia - Eorôpa - Eorazia - Amerika (Amerika Avaratra - Amerika Atsimo) - Antarktika - Ôseania
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerika&oldid=1040940"
Dernière modification le 4 Desambra 2021, à 08:55
Voaova farany tamin'ny 4 Desambra 2021 amin'ny 08:55 ity pejy ity.